Ciyaartoy Kansar Ku Dhacay Oo Garoomada Ku Jira
HomeWararka MaantaCiyaartoy Kansar Ku Dhacay Oo Garoomada Ku Jira
Goolhayaha kooxda kubadda cagta hablaha Birmingham City, Ann-Katrin Berger ayaa garoomada kusoo laabatay kaddib qalliin lagaga daaweeyey xanuunka halista ah ee Kansarka.
Goolhaye Berger oo ay da’deedu tahay 27 jjir, horena ugu ciyaari jiray PSG, ayaa ku biirtay Birmingham sannadkii 2016, hase yeeshee bishii November ayaa la dhigay cusbitaalka si looga daweeyo xanuunkan halista ah.
Haweenaydan oo u dhalatay waddanka Germany ayaa hadal ay barteeda bulshada ku baahisay waxay ku sheegtay in si fiican loogu guuleystay qalliinkii lagu sameeyey, garoomadana ay degdeg ugu soo laabanayso. Waxay xustay inay aad ugu farxsan tahay inay ka kacdayy xanuunkii, laakiin ay u baahan tahay wakhti si ay mar kale ugu suurtogasho inay garoomada ciyaaraha kusoo laabato.
Berger ayaa ka caawisay Birmingham City inay tagto laba final oo waaweyn, kuwaas oo kala ahaa Finalkii tartanka Continental Cup ee 2016 iyo finalkii FA Cup ee 2017, waxaase nasiib darro labadaas koob ka qaaday hablaha Manchester City.
Tababaraha hablaha Birmingham City oo bishii November saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in Ann ay ka bogsan doonto xanuunka oo ay mustaqbalka dhow kusoo laaban doonto garoomada.